Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 10)
Sababaha loo iibsado taleefanka dhexdhexaadka ah
4 sababood oo loo iibsado taleefanka dhexdhexaadka ah Raadi wax badan oo ku saabsan sababaha ugu waaweyn ee ay kugula talineyso inaad iibsato taleefan dhexdhexaad ah.
Ciyaaraha ugu fiican ee xaqiiqda dhabta ah ee loogu talagalay Android
Afarta kulan ee ugu fiican xaqiiqda dalwaddii loogu talagalay Android. Kala soo bax xulashadan cayaaraha ugu wanaagsan ee noocan ah ee hadda laga heli karo Android.
Android Wear 2.9 wuxuu yeelan doonaa miiska ogeysiisyada aan la aqrin
Shaaciyey qaar ka mid ah astaamaha cusub ee Android Wear 2.9. Raadi wax badan oo ku saabsan wararka uu cusbooneysiinta saacadda cusub keenay.
Sida loo jabsado Facebook-ga saaxiibtaa, asxaabtaada iyo dadka aad taqaanaba. Ka taxaddar in ay fududahay in la jabsado Facebook oo la helo lambarkaaga sirta ah !!!
Cashar fudud oo fiidiyow ah oo aan ku sharaxo sida loo jabsado Facebook ama sida loo helo furaha sirta ah ee lagu galo Facebook asxaabtaada, asxaabtaada iyo ehelkaaga.
Barnaamijka beta S8 ee beta ayaa soo afjarmaya
Samsung waxay soo gabagabeyneysaa barnaamijka Android Oreo beta ee loogu talagalay Galaxy S8. Raadi wax badan oo ku saabsan dhamaadka barnaamijka beta iyo taariikhda taleefanka la cusbooneysiin doono.
Soo dejiso oo rakib mawduucyada Xiaomi Mi A1 (SKINS)
Casharro fiidiyow ah oo ficil ah oo aan ku sharraxayo sida loo soo dejiyo loona rakibo mawduucyada Xiaomi Mi A1, oo ah terminaalka na siinaya khayaaliga isticmaalayaasha Android.
Google Files Go waa la cusbooneysiiyay wuxuuna soo bandhigayaa seddex astaamood oo cusub
Google Files Go waxaa lagu cusbooneysiiyay astaamo cusub. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan astaamaha cusub ee codsigu nagu keeno cusbooneysiintiisa.
Android Oreo wuxuu si rasmi ah ugu yimid Moto X4
Moto X4 wuxuu bilaabaa inuu helo Android Oreo si rasmi ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta hadda laga heli karo Mareykanka.
Nokia 8 wuxuu helaa beta-ka Android 8.1 Oreo
Android 8.1 Oreo wuxuu ku socdaa qaab beta ah Nokia 8. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta hadda loo heli karo taleefanka sare ee Nokia.
Google Chrome wuxuu cusbooneysiiyaa oo xayirayaa dhawaqa xayeysiinta iyo wararka kale
Google Chrome wuxuu cusbooneysiiyaa oo xiraa codka xayeysiinta. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan wararka uu biraawsarka nooga tagayo cusbooneysiintiisa cusub.
Ulefone Power 3 Max wuxuu yeelan doonaa batari weyn oo ah 13.000mAh
Ulefone waxay xaqiijisay inay durbaba ka shaqeyneyso bedelka Power 3 ... Waa Ulefone Power 3 Max, terminal awood leh oo la imaan doona batari aad u weyn oo gaaraya 13.000mAh si uu u adkeysto dhamaan dalabkeena iyadoo aan loo eegin waqtiga. Waanu kugu balaarinay!
3 Ciyaaraha Sonic ayaa daadanaya xogta ciyaaryaha gaarka loo leeyahay
3 Ciyaaraha SEGA Sonic ayaa daadanaya xogta ciyaaryahanka gaarka loo leeyahay. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan daadadan saameynaya ciyaaraha SEGA ee Google Play.
Harry Potter: Hogwarts Mystery ayaa hadda laga heli karaa Google Play iyo APK
Harry Potter: Hogwarts Mystery ayaa hadda laga heli karaa Google Play iyo APK. Raadi wax badan oo ku saabsan bilaabida ciyaarta cusub ee Android ee ku saleysan sheekada caanka ah.
Ila X: Dib u eegis qoto dheer oo ku saabsan Android ka kooban 80 euro oo keliya
Toban maalmood ka dib isticmaalka Ila X, halkan waxaa ku yaal dib u eegis qoto dheer oo ku saabsan terminalka Android ee doonaya inuu noqdo mid ka mid ah iPhone X oo kaliya ku kacaya 80 Euro
Android 8.1. wuxuu tusi doonaa xawaaraha shabakad WiFi furan intaadan xirmin
Android 8.1. Waxay ku bari doontaa xawaaraha shabakad WiFi furan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan astaamaha cusub ee imanaya nooca cusub ee nidaamka hawlgalka Google.
Samsung Galaxy J8 oo loo maleynayay inuu ku daatay Android 8.0 Oreo
Dhawaan, GFXBench iyo GeekBench aalad Samsung ah ayaa la dusiyay, waxayna noqon kartaa Galaxy J8 ama, haddii taa la waayayo, kaliya waa nooc la hagaajiyay oo ah J7 oo wata Android 8.0 Oreo iyo qeexitaanno kale oo dheeri ah kala duwan ee shirkadda South Korea.
Safarada Google waxay muujineysaa fiidiyowyo iyo boggag internet ah oo aad booqaneyso
Safarada Google ayaa ku tusi doona fiidiyowyo iyo baloogyo ka socda boggaga aad booqato. Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee imanaya abka caanka ah.
Tilmaamaha si looga fogaado ku rakibida barnaamijyada xun xun mobilkaaga
Sida looga fogaado ku rakibida barnaamijyada xun xun taleefankeena. Soo ogow tilmaamahan si ay kaaga caawiyaan inaad ka fogaato rakibida barnaamijyada xun.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android si loo xakameeyo kharashyada
4-ta codsi ee ugu fiican Android si loo xakameeyo kharashyada. Kala soo bax xulashadan codsiyada kaa caawin doona inaad si fudud u xakamayso kharashyada oo aad awoodi karto inaad keydiso.
Barnaamijyadii ugu xumaa ee Android
Shanta barnaamij ee ugu xun Android ee aad soo dejisan karto. Ka ogow wax badan oo ku saabsan xulashadan codsiyada ugu xun ee loogu talagalay Android.
5-ta kulan ee xujada ugu fiican ee Android. Kala soo bax xulashadan ciyaaraha xujada ugu fiican ee aan hadda ka heli karno Androd.
5 ciyaar fudud oo aan kala soo dagsan karno taleefankeena gacanta ee Android
5 ciyaaro fudud oo diyaar u ah Android. Kala soo bax xulashadan cayaaraha nalka ugu fiican ee aad ka heli karto taleefannada Android.
Samsung waxay sii deyneysaa Cusboonaysiinta Amniga Janaayo ee Galaxy S8 iyo S8 +
Cusboonaysiinta amniga bisha Janaayo ee Samsung Galaxy S8 iyo Galaxy S8 + hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Microsoft ee loogu talagalay Android
5-ta barnaamij ee ugu fiican Microsoft ee loogu talagalay Android. Soo ogow xulitaankan barnaamijyada Microsoft ee hadda loo heli karo taleefannada Android.
Ciyaaraha la midka ah ee Clash Royale oo aadan seegi karin
5 kulan Android la mid ah Clash Royale. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xulitaankan cayaaraha Android ee ay dhiirrigelisay caanka caanka ah ee loo yaqaan 'Clash Royale'.
Cusbooneysiinta Android Oreo ee loogu talagalay Galaxy S6 ayaa imaan kara kahor Febraayo
Mar labaad waxaan ka hadlaynaa suurtagalnimada dhabta ah ee sii kordheysa ee Samsung Galaxy S6 loo cusbooneysiiyay Android Oreo. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in la sii deyn doono ka hor dhamaadka Febraayo
Codsiyada Android aad u faa'iido badan laakiin dadka isticmaala ay yaryihiin
Afar barnaamij oo waxtar leh laakiin aad loo yaqaan oo Android ah. Soo ogow barnaamijyadan Android ee adeegsadayaashu yar yaqaaniin laakiin ugu faa iidada badan.
Android Wear 2.8 waa halkaan oo wuxuu keenayaa war
Android Wear 2.8 waa xaqiiqo jirta waxayna ka tagtaa dhowr war. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan wararka la socda cusboonaysiinta saacadaha.
Sida loo helo Launcher Edge ee HTC U11 wax kasta oo Android ah
Halkan waxaad ku haysataa habka ugu fudud ee aad ku yeelan karto Launcher Edge ee HTC U11 wax kasta oo Android ah oo aan lahayn Root ama inaad raacdo casharro adag oo wax ku ool ah ama iftiiminaya.
Caalamka: Mustaqbalka buugga xiriirku wuu dhashay
Universale: Mustaqbalka buugga xiriirku waa dhab codsigan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan codsigan doonaya inuu beddelo habka aad u abaabusho xiriiradaada.
Codsi loogu talagalay kuwa ugu illooba oo wax badan kaa caawin doona
Codsi loogu talagalay kuwa ugu illowsan oo kaa caawin doona wax badan, fudud oo loo isticmaalo oo u adeegta in lagu badbaadiyo wax kasta oo aad rabto ee daruurahaaga Gmail si aad u fudud.
Sida loo soo celiyo dhamaan barnaamijyadeenii laga soo qaatay Android-keena hore ilaa midka cusub
Tababarka fiidiyowga oo aan ku tusayo tallaabo tallaabo ah sida looga wareejiyo codsiyadayada ka imanaya Android-keena hore ee qalabka cusub. Xitaa wareejinta barnaamijyadooda ka iPhone.
Honor 8 ma heli doono cusbooneysiinta Android Oreo
Maamuuska 8 wuxuu ku egyahay cusbooneysiinta Android Oreo. Raadi wax badan oo ku saabsan sababaha taleefankaagu awoodi kari waayo inuu cusbooneysiiyo.
Galaxy J7 Prime iyo Galaxy Tab E ayaa loo cusbooneysiin doonaa Android 8.0 Oreo
Saldhigyada Samsung Galaxy J7 Prime iyo Galaxy Tab E ayaa sidoo kale loo cusbooneysiin doonaa Android 8.0 Oreo, sida uu xaqiijiyay howl wadeenka T-Mobile.
Beta-ka Android Oreo wuxuu yimaadaa Huawei P10 iyo P10 Plus
Huawei P10 iyo P10 Plus waxay helayaan qalabka 'Android Oreo beta'. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka beta ee nidaamka hawlgalka illaa dhamaadka sare ee Huawei.
Sida loo kaydiyo SMS-ka iyo Call Call aan xidid lahayn
Casharro fiidiyow ah oo ficil ah oo aan ku barayo inay abuuraan keydinta SMS iyo wicitaannada iyadoon loo baahnayn inay xidid noqdaan oo ansax noqdaan in lagu soo celiyo isla terminal ama terminal kala duwan.
Xiaomi waxay dib u cusbooneysiineysaa cusbooneysiinta Android Oreo ee Mi A1 markale, maalmo ka dib markii ay ka noqotay
Xiaomi waxay ku deg degtay si ay u saxdo dhibaatooyinka ay bixiso cusbooneysiinta Android Oreo ee Mi A1 iyo cusbooneysiinta cusub ee leh dhammaan cayayaanka la hagaajiyay ayaa hadda la heli karaa.
Nokia 6 (2018) iyo Nokia 7 waxay ku helayaan cusbooneysiinta Android Oreo
Nooca xasiloon ee Android Oreo wuxuu u imanayaa Nokia 6 (2018) iyo Nokia 7. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusboonaysiinta taleefankaaga nooca ugu dambeeya ee nidaamka qalliinka.
LG V30 wuxuu bilaabaa inuu helo cusbooneysiinta Android Oreo
Android Oreo wuxuu bilaabaa inuu la gaaro dadka isticmaala LG V30. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta horeyba u gaadhay qaar ka mid ah adeegsadayaasha taleefanka LG.
Mashiinka Microsoft Edge ayaa loo cusbooneysiiyay Android Oreo oo leh warar xiiso leh
Microsoft Edge waa la cusbooneysiiyay oo wuxuu dhexgeliyaa warar khiyaano leh laakiin xiiso leh iyo horumarin loogu talagalay Android Oreo. Waxaa ka mid ah astaamaha loo yaqaan 'Adaptatives Icons' ee nooca OS-kan ah barnaamijkan, iyo hagaajinta akhriska. Soo ogow!
Xiaomi wuxuu hakad geliyaa cusbooneysiinta Android Oreo ee Xiaomi Mi A1
Xiaomi wuxuu hakad geliyaa cusbooneysiinta Android Oreo ee Xiaomi Mi A1. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka shirkadda ee ka dambeeya dhibaatooyinka badan ee hawlgalka.
Waraaqaha moobiilka ugu fiican ee leh shaashadda 18: 9
Waraaqaha moobiilka ugu fiican ee leh shaashadda 18: 9. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xulashada waraaqahaas oo aad hadda soo dejisan karto.
Barnaamijyada ugu fiican ee Android si loo cabiro hurdada
5-ta codsi ee ugu fiican Android si loo cabiro hurdada. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan kaa caawinaya inaad cabirto hurdada.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada lacag-bixinta degdegga ah
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka isticmaalka xawaaraha degdegga ah ee mobilkaaga. Ogow wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay na siiso.
Hawlaha ay tahay inay WhatsApp ka adkaato Telegram
4 qaab oo ka caawin lahaa WhatsApp garaacida Telegram. Soo ogow shaqooyinkan oo ka caawin lahaa barnaamijka sidii looga guuleysan lahaa loolanka ugu weyn.
Barnaamijyada Android ee cidina xusuusan
6 codsiyada Android ee aan cidina xusuusan doonin mar dambe. Soo ogow barnaamijyadan casriga ka baxay ee aan cidina dib u xusuusan.
Tabaha lagu hagaajinayo waxqabadka GPS
4 tabaha si loo hagaajiyo waxqabadka GPS. Soo ogow xeeladahan fudud ee kuu oggolaanaya inaad ka dhigto GPS-kaaga inuu u shaqeeyo si aad u fiican oo saxsan.
5 su'aalood oo la isweydiiyo marka la sameynayo app
Maxay yihiin su'aalaha aan isweydiineyno markaan qaabeyneyno dalab? Soo ogow su'aalahan ku caawin doona markaad u tagto naqshadeynta arjiga.
Hadda haa, Android Oreo horeyba waa loogu heli karaa OnePlus 5
Soo saaraha OnePlus ayaa hadda bilaabay cusbooneysiin cusub oo ah 'Android Oreo' oo loogu talagalay boosteejooyinka OnePlus 5, laakiin markan waa nooc ka xasilloon kan ka ay bilawday dhammaadkii bishii Diseembar ee sanadkii hore.
Barnaamijyada kamaradaha xawaaraha ugu fiican ee loogu talagalay Android
5-ta barnaamij ee kamaradaha xawaaraha ugu fiican ee Android. Ku soo hel xulashadan barnaamijyada radar-ka ugu wanaagsan ee laga heli karo Android.
Ciyaaraha chess ee ugu wanaagsan Android
5ta kulan ee Chess ee ugu wanaagsan Android. Kala soo bax xulashadan cayaaraha chess-ka ugu wanaagsan ee laga heli karo Android.
[APK] SoundCloud Music Mod oo la jaan qaada Viper4Android
Halkan waxaan kaaga tagayaa waxaanan ku tusayaa sida loo rakibo iyo waxqabadka uu Soundk Music Mod apk na siiyo, dalabka dhageysiga muusiga qulqulka ee dabeecadda bulshada.
Samsung copilot: Codsiga kaa hor istaagaya inaad ku seexato gaariga
Samsung Copilot: Codsiga ka hortagi doona lulmidda gawaarida. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan codsigan loogu talagalay smartwatches oo ay soo saartay shirkadda Samsung.
Waxaan joojinayaa sigaar cabista !!. Ma wada qabannaa?
Caqabaddayda ama ujeeddadayda sannadkan 2018 waa tan kuwa kale oo badan oo dhaha ama raba inay joojiyaan sigaar cabista, ujeedo aan macquul ahayn oo lagu fuliyo doonis la’aan, caawimaad ama xitaa qaab.
Cusbooneysiinta WhatsApp waxay noo ogolaaneysaa inaan dhageysano qoraallada maqalka ah ka hor inta aan la dirin
WhatsApp waxay kuu ogolaaneysaa inaad dhageysato qoraal maqal ah intaadan dirin ka hor. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sheekadan cusub ee ku imaan doonta cusboonaysiinta dalabka.
Sida loo sameeyo badhanno Telegram adoo adeegsanaya QuickSilver
Tababarka fiidiyowga ee la taaban karo oo aan ku tusayo sida loo abuuro badhamada Telegram adoo adeegsanaya QuickSilver bot. Abuuritaanka farriimo qurux badan leh badhanno iyo falcelinno.
HTC U11 waxaa si rasmi ah loogu casriyeeyay Android 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo waxay si rasmi ah u timid HTC U11. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cusbooneysiinta dhamaadka-calaamadda noockan nidaamka qalliinka.
Android Nougat mar horeba waa nooca labaad ee ugu isticmaalka badan iyo niyad jab Oreo
Android Nougat waa nooca labaad ee ugu isticmaalka badan Android. Raadi xogta qaybinta Android adduunka oo dhan bisha Janaayo.
Beta-ka Android Oreo ee loo yaqaan 'Huawei P10' ayaa yimaadda Yurub
Huawei P10 ee Yurub wuxuu helaa beta-ka Android Oreo. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka cusboonaysiinta taleefannada Huawei.
Moto G4 Play wuxuu ugu dambeyn helayaa Android 7.1.1 Nougat 13 bilood kadib
Iyadoo kudhawaad ​​hal sano oo daahitaan ah, isticmaale ka tirsan Moto GG4 Play ayaa arkay sida uu terminal-kiisu u helay casriyeynta Android Naught, oo ah cusbooneysiin ay ku jiraan shaashadda amniga ee u dhiganta Noofambar 2017
Nokia 6 wuxuu imaan doonaa Spain isagoo wata Android 8.0 Oreo
Nokia 6 wuxuu si rasmi ah ula imaan doonaa Android 8.0 Oreo gudaha Spain. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta hadda loo heli karo taleefankaaga.
Khiyaamada si aad uga faa'iidaysato Kaaliyaha Google
5 khiyaanooyin si aad uga faa'iidaysato Kaaliyaha Google. Raadi wax badan oo ku saabsan khiyaanooyinkaas noo oggolaanaya inaan ka faa'iideysanno Kaaliyaha Google.
Hisense P9 waxaa lagu arkaa TENAA oo leh batari 6000mAh ah iyo shaashad AMOLED 5.5 inji ah
Taleefanka casriga ah ee aadka u adkaysta, ee Hisense P9, ayaa lagu arkay TENAA, waxaanan horeyba u haysannaa dhammaan faahfaahinta ku saabsan moobilkan arki kara iftiinka CES ee Las Vegas maalmaha soo socda. Baro taas!
Xeeladaha ugu wanaagsan ee Spotify ee Android
3 khiyaanooyin si aad uga faa iideysato Spotify-ka Android. Soo ogow tabahaan fudud ee aad ugu adeegsan karto arjiga caanka ah si ka wanaagsan.
Codsiyada ugufiican ee lagu dhagaysto qoraalada kujira Android
5-ta barnaamij ee ugufiican ee lagu dhagaysto qoraalada kujira Android. Kala soo bax xulashadan codsiyada ugu fiican ee noocan ah ee loogu talagalay Android.
Ka fikirida Android la'aanteed Google waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn, laakiin waxaa jira qaab kale. Eelo waxay na siisaa nidaamka mobilada ee ku shaqeeya Android laakiin aan lahayn Google.
Barnaamijyada casho fudud ee ugu wanaagsan Android
Saddexda barnaamij ee casho fudud ee ugu fiican Android. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijyadan kaa caawin doona wixii ka dambeeya Kirismaska.
Lixda kulan ee ugu fiican dagaalka ee loogu talagalay Android. Baro xulashadan cayaaraha dagaal ee ugufiican ee hadda la heli karo ee loogu talagalay Android.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android si loo abuuro xusuusin
5-ta barnaamij ee ugu fiican ee xusuusinta ee loogu talagalay Android. Soo ogow xulitaankan codsiyada xusuusinta ah ee horeyba loo heli jiray.
Qaar ka mid ah Galaxy Note 8 ayaa bilaabay inay helaan nuqulkii ugu dambeeyay ee Android Oreo
Qaar ka mid ah dadka isticmaala Galaxy Note 8 waxay ku andacoodaan inay heleen casriyeynta nooca ugu dambeeya ee Android Oreo, nooca ugu dambeeya, betas ama wixii la mid ah
The Honor 8 Pro wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta Android Oreo
Android Oreo waxay u timaadaa Honor 8 Pro qaab beta ah. Raadi wax ku saabsan cusboonaysiinta nooca ugu dambeeya ee nidaamka hawlgalka taleefanka.
Ciyaaraha beeraha ee ugu wanaagsan Android
Afarta kulan ee ugu fiican beeraha ee loogu talagalay Android. Raadi wax badan oo ku saabsan xulashadan oo leh cayaaraha ugu wanaagsan ee beeraha loo heli karo Android.
Codsiyada lagu fulinayo go'aannada sanadkaaga cusub
6 codsiyada Android si aad u fuliso qaraarada sanadkaaga cusub. Kula kulan dhammaan himilooyinkaas aad naftaada u dejisay lixdaan codsi.
Sida loo helo wajiga Oneplus 5T ee lagu furo Android-kaaga
Xeelad fudud ama tababar fiidiyow oo ficil ah oo aad ku helayso furitaanka wajiga Oneplus 5T si toos ah loogu furo wejigaaga adigoon marin shaashadda qufulka.
OPPO R11S waxay heshaa cusbooneysiinta Android 8.1. Hawada
Android 8.1. Oreo wuxuu ku yimaadaa OPPO R11S si rasmi ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta horeyba looga heli jiray aaladda aaladda Shiinaha.
Android Oreo wuxuu bilaabaa inuu gaaro Galaxy S8 Mareykanka
Android Oreo ilaa Galaxy S8 qaabkeedii ugu dambeeyay si dhakhso leh. Mareykanka gudihiisa waxaa horeyba u jiray isticmaaleyaal bilaabay inay helaan qaabkan.
S6 edge + cusboonaysiinta amniga ee bisha Diseembar hadda waa la heli karaa
Cusboonaysiinta amniga ee Galaxy S6 edge + oo u dhiganta bisha Diseembar, ayaa durbadiiba bilaabay inay helaan dhammaan dadka isticmaala, iyada oo la bilaabayo mar kale Shiinaha.
OnePlus wuxuu kansal gareeyaa Android Oreo OTA ee OnePlus 5. Faahfaahin dheeraad ah ka hel sababaha shirkada ay u qaadatay go aankan.
Xiaomi Mi A1 wuxuu ku cusbooneysiiyaa Android Oreo si rasmi ah
Android Oreo wuxuu si rasmi ah u yimid Xiaomi Mi A1. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta horay loogu heli karo taleefankaaga.
Samsung waxay sii deyneysaa cusbooneysiinta amniga ee Galaxy A7 (2017)
Jaangooyooyinka kala duwan ee Galaxy A7 2017 ayaa durba leh casriyeyntii ugu dambeysay ee amniga ee ay soo saartay shirkadda Samsung.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee DJ ee loogu talagalay Android
Shanta barnaamij ee ugu wanaagsan DJ ee loogu talagalay Android. Soo ogow xulashada barnaamijyadan si aad u noqotid DJ-ka ugu wanaagsan ee hadda loo heli karo Android.
Codsiyada ugu wanaagsan ee Android si loogu hambalyeeyo Sannadka Cusub
5-ta barnaamij ee ugu wanaagsan Android si loogu hambalyeeyo Sannadka Cusub. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xulashada barnaamijyada aad ugu hambalyeyneyso asxaabta iyo qoyska.
Barnaamijyada Android markaa uma baahnid inaad wadatid Sannadkan Cusub
4 codsiyada Android si aan loo isticmaalin gaariga sanadka cusub. Soo hel barnaamijyadan aanad ku kaxayn doonin baabuur.
Tilmaamaha ugu fiican ee dejinta mobilo cusub
5 talooyin waxtar leh si aad uhesho moobil cusub. Soo ogow xulitaankan talooyinka fudud ee kuu oggolaanaya inaad dejiso taleefan cusub.
5 shaqooyinka Android 8.1. Oreo aan la ogeyn dadka isticmaala. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan astaamahan nooca cusub ee nidaamka qalliinka.
Barnaamijyada ugufiican ee lagu qeexo abs on Android
Saddexda barnaamij ee ugu wanaagsan ee ABS loogu talagalay Android. Soo ogow codsiyada ugu fiican ee naga caawin doona inaan qeexno maqnaanshaheena.
Samsung waxay sii deyneysaa Nooca dib loo eegay ee Tizen 3.0 si loo xaliyo arrimaha batteriga
Samsung ayaa hadda soo saartay nooc cusub oo dib loo eegay ee Tizen 3.0 si loo xaliyo arrimaha batteriga ee ku dhacayay qalabka qaar.
Codsiyada ugu wanaagsan ee lagu duubo shaashadda Android
Afarta codsi ee ugufiican ee lagu duubo shaashadda Android. Kala soo bax xulashadan barnaamijyada ugu fiican ee noo oggolaanaya inaan duubno shaashadda taleefankayaga.
Galaxy A3 2016 iyo A3 2017 waxay helayaan cusboonaysiin amni oo cusub
Galaxy A3 2016 iyo A3 2017 ayaa hadda helay casriyeyn cusub oo xagga amniga ah, cusbooneysiin ah oo sidoo kale hagaajineysa waxqabadka labada nooc iyo hagaajinta cilladaha yaryar.
Nokia 2 wuxuu cusbooneysiin doonaa Android 8.1 Oreo oo leh hagaajinta Android Go
Nokia 2 wuxuu cusbooneysiin doonaa Android Oreo oo leh horumarin lagu sameeyo Android Go. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta taleefanka Nokia ugu jaban.
Had iyo jeer shaashadda iyo hal sano oo batari ah ayaa ah waxa cusub ee Garmin Vivofit 4 na siiya
Quantifying jijimadu waxay u noqdeen moodada hadiyad guud, gaar ahaan xilliga Kirismaska, badanaa sababtuna tahay ...
LG G6 wuxuu bilaabaa helitaanka Android Oreo
Android Oreo wuxuu bilaabaa inuu yimaado LG G6 ee Kuuriyada Koonfureed. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta in qaar ka mid ah isticmaaleyaashu horeba u haysteen.
LG V30 wuxuu helaa nooca ugu dambeeya ee Android Oreo
Noocii ugu dambeeyay ee LG ee helay Android Oreo, wuxuu ahaa LG V30, oo ah terminal bilaabay inuu helo casriyeyntii ugu dambeysay ee ka bilaabata Korea
The OnePlus 5 wuxuu bilaabaa inuu helo Android Oreo oo leh shaqada furitaanka wajiga
Nooca ugu dambeeya ee Android Oreo ee loogu talagalay OnePlus 5 ayaa hadda loo heli karaa qof walba wuxuuna keenayaa furitaanka 5T
Barnaamijyada ugu fiican ee jimicsiga ku saabsan Android
Afarta barnaamij ee ugu fiican jimicsiga Android. Ka ogow wax badan oo ku saabsan xulitaanka barnaamijyada laga heli karo Android.
La wadaag faylalkaaga Sawirada Google qofkii aad rabto
Sawirada Google, haddii aadan ogeyn, waxay na siineysaa ikhtiyaar aan kula wadaagno maktabadda sawirkeena, ama galka la xushay cidda aan dooneyno, arag sida loo sameeyo.
Ciyaaraha kirismaska ​​ee ugu wanaagsan Android
Afarta kulan ee Kirismaska ​​ee ugu wanaagsan Android. Kala soo bax xulashadan cayaaraha ugu wanaagsan ee Kirismaska ​​ee horeyba loo heli karo.
Android Oreo wuxuu bilaabaa inuu yimaado Moto X4
Terminalka ugu dambeeya ee umuuqda inuu helayo Android Oreo kahor dhamaadka sanadka waa Moto X4, oo bilaabay inuu helo.
Ciyaaraha kali kali ee Android
Afarta kulan ee ugu fiican ee loogu talagalay Android. Ku soo hel xulitaankan kulamada kalidaa ugu wanaagsan ee laga heli karo Android.
Ciyaaraha baseball ee ugu wanaagsan Android
Afarta kulan ee baseball ee ugu wanaagsan Android. Kala soo bax xulashadan cayaaraha Baseball ee ugu wanaagsan ee laga heli karo Android.
Boorsooyinka Bitcoin ugu fiican ee loogu talagalay Android
Saddexda boorsooyinka Bitcoin ugu fiican ee loogu talagalay Android. Soo ogow xulitaankan boorsooyinka shaashadda caanka ah ee loo yaqaan 'cryptocurrency' ee hadda laga heli karo Dukaanka Play.
Muuqaalka fiidiyowga: Blackview BV9000 Pro wuxuu maraa tijaabooyin adkaysi adag
Blackview BV9000 Pro wuxuu maraa adkeysi adag iyo tijaabooyin xoog leh oo ay ku guuleysato. Waxaan ku tuseynaa natiijooyinka!
Dhacdadii Pokémon GO Christmas ayaa durba bilaabatay
Dhacdadii Pokémon GO Christmas ayaa durba bilaabatay. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhacdada caanka ah ee ciyaarta Niantic ciyaarta Kirismaska ​​ee durba bilaabatay.
Instagram waxay kuu ogolaaneysaa inaad u dirto fiidiyowyo toos ah fariimo toos ah
Hadda waxaad ku diri kartaa fiidiyowyo toos ah farriimaha tooska ah ee 'Instagram'. Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee barnaamijku soo bandhigay.
Sidee loo heystaa 2 bilood bilaash ah Music Unlimited, adeegga muusikada ka socota Amazon waa qabow
Hadda waxaan haysan karnaa 2 bilood oo bilaash ah oo ah Amazon Music Unlimited oo keliya adoo kireysanaya qorshaha qoyska iyada oo aan wax ballanqaad ah jirin.
Datool ahaan Google, runti miyuu keydiyaa xogta?
Dhab ahaan ma Google ayaa runtii xal u ah in lagu kaydiyo xogta ku jirta marinnadayada 'Android' sida ay ballanqaadeen kuwa ka socda Mountain View?
Loapi: Fariin xumada macdanta laga qodo ee loo adeegsado qalabkaaga
Loapi malware macdanta cryptocurrencies iyadoo la adeegsanayo qalabkaaga. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan furinkan maanta saameynaya aaladaha Android.
Beta 'Android Oreo beta' ayaa ku soo dhacaya Nokia 6
Nokia 6 wuxuu horey uhelay beta-ka Android Oreo. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta hadda loo heli karo qalabkaaga.
Codsiga ugufiican ee looga soo dejisan karo fiidiyowyada Youtube, Facebook, Instagram ...
Codsi xasaasi ah oo noo ogolaanaya, waxyaabo kale oo badan, inaan kala soo baxno fiidiyowyada YouTube, Facebook, Instagram iyo boggag kale oo badan.
Beta-ka Android Oreo wuxuu gaaraa Galaxy S8 ee dalka Spain
Galaxy S8 ee Spain waxay heshaa beta-ka Android Oreo. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta taleefanka Samsung hadda la heli karo.
Chrome 64 ayaa xannibi doona soo-baxayaasha iyo fiidiyowyada is-u-ciyaaraya
Chrome 64 waxay la imaan doontaa xannibaade pop-up ah cusbooneysiintiisa. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan wararka Chrome 64 uu na soo wado.
10ka barnaamij ee ugu sareeya 2017
Top 10 Apps 2017 ee loogu talagalay Android. Soo hel liiskan codsiyada ugufiican ee maanta laga heli karo aaladaha Android.
Qaabka nacaybka Arkanoid 2017 !!
Arkanoid waxashnimo ah ayaa loo cusbooneysiiyay waqtiyada iyadoo la adeegsanayo qaab casri ah iyo mid hadda jira iyo nidaam ciyaar oo aad jeceshahay oo aad jillaabayso.
Android Oreo ayaa dhowaan imaaneysa Moto X4
Moto X4 wuxuu awoodi doonaa inuu cusbooneysiiyo Android Oreo si dhakhso leh. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Oreo' ee dhowaan ku soo socota taleefanka Motorola.
Mawduucyada Kirismaska ​​ee ugu wanaagsan Android
Mawduucyada ugu wanaagsan ee kirismaska ​​ee loogu talagalay Android. Soo ogow xulitaankan mawduucyada Kirismaska ​​ee la heli karo si aad uga soo dejiso qalabkeenna Android.
Sidee loo ogaadaa haddii guddiga taabashada taleefankayga gacanta uu dhaawacan yahay
Afar siyaabood oo lagu ogaan karo haddii guddiga taabashada mobilka ay waxyeello gaareyso. Soo hel dariiqooyinkan si aad u ogaato haddii mobiilku shaqeyn waayo.
Ciyaaraha naxdinta ugu fiican ee loogu talagalay Android
Ciyaaraha naxdinta ugu fiican ee loogu talagalay Android. Kala soo bax xulashadan cayaaraha ugu wanaagsan ee naxdinta leh ee aan kala soo bixi karno Android.
Siyaabaha looga tago koox WhatsApp ah
4 siyaabood oo aad kaga bixi karto koox WhatsApp. Soo ogow siyaabahan si aad uga baxdo koox ku jirta barnaamijka fariimaha caanka ah.
Instagram waxay ku dareysaa istiikarada cusub, saameynta Superzoom iyo miirayaasha Kirismaska
Shaandheeyeyaasha, istiikarada iyo saamaynta Superzoom ee cusbooneysiinta Instagram. Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta abka caanka ah.
Barnaamijyada ugu caansan ee kirismaska ​​ee loogu talagalay Android
Saddexda barnaamij ee ugu wanaagsan ee kirismaska ​​ee loogu talagalay Android. Soo ogow xulitaankan barnaamijyada aan hadda soo dejisan karno.
Tilmaamaha Android ee lumay sabab la'aan
Afar Astaamood oo Android ah oo la waayey. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan astaamahan Android ee la joojiyay waqti ka dib.
Ilaa 50% qiimo dhimis sanadguuradii koowaad ee LEAGOO !!
LEAGOO waxay leedahay qiimo dhimis iyo qiimo jaban oo la heli karo wakhti xaddidan oo laga heli karo Aliexpress. Ma rabtaa inaad ogaato waxay yihiin?
Soo dejiso Firefox Rocket, oo laga yaabo inay tahay shabakadda internetka ee ugu dhaqsaha badan Android
Halkan waxaad ku haysaa apk si aad u soo dejiso Firefox Rocket, oo ah biraawsarka webka oo saddex jeer ka dhakhso badan Google Chrome wuxuuna naga caawinayaa inaan keydinno xogta daalacashada.
Barnaamijka Android Oreo beta ee loogu talagalay BQ Aquaris X iyo X Pro ayaa furmay. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan imaatinka nidaamka hawlgalka labada taleefan.
Google ayaa 85 codsi ka saartay Play Store oo xaday furayaasha sirta ah. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadooda xatooyada sirta ah.
Android Oreo oo imanaya Galaxy S8 bisha Janaayo
Samsung Galaxy S8 ayaa heli doonta Android Oreo bisha Janaayo. Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka cusboonaysiinta Samsung-dhamaadka sare.
Kaaliyaha Google wuxuu bilaabaa inuu la gaaro terminal-ka Android Lollipop
Ugu dambeyntiina, adeegsadayaasha leh terminal ay maamusho Android Lollipop, waxaan hadda ku isticmaali karnaa kaaliyaha Google saldhigyadeenna.
Buug-gacmeedka Android, hagaha aasaasiga ah ee bilowga ah
Raadinta buug-gacmeedka Android? Soo bandhigida hagaha ugu dambeeya ee dadka cusub ee Android. Ma jiraan wax aadan aqoon sida loo sameeyo? Gali oo ka tag shakiga.
Taasi waa aniga arjiga kaa caawin doona inaad soo ceshato waxyaabihii aad amaahatay
Codsi cusub oo xasaasi ah oo loogu talagalay Android oo kaa caawin doona inaad dib u soo ceshato waxyaabihii aad amaahatay, sidaad u dhageysaneysaba.
Nokia 5 wuxuu horey uhelay beta-ka Android Oreo
Beta-ka Android Oreo wuxuu imanayaa Nokia 5. Waxbadan ka ogow beta-ka nidaamka qalliinka ee imika ku soo socda qalabka Nokia.
Qaybta suuqa ee 'Android Oreo' wali wey hooseysaa
Android Oreo waxay leedahay suuq aad u hooseeya. Ku ogow warbixinta qaybinta Google qaybta suuqa ee nooc kasta oo Android ah.
Madaxweyne ku xigeenka shirkadda Apple ee suuqgeynta adduunka ayaa dhaleeceeyay aqoonsiga wajiga ee aaladaha Android, isagoo ku faanay in Apple ay ka sarreyso.
7 Ciyaaraha Platform-ka ee loogu talagalay Android in kastoo ay gooyaan isla qaab isku mid ah, waa ciyaaro aad balwad u leh sidoo kalena uma baahna xiriir internet.
Android 8.0 Oreo waxaa hadda lagu tijaabin karaa Galaxy Note 8
Galaxy Note 8 wuxuu horey u tijaabin karaa Android 8.0. Hawada. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta oo si lama filaan ah ku timid taleefanka Samsung.
Monster Ninja, waa ciyaar madal hadda socda oo ka duwan tii hore oo kugu xidhi doonta
Markaan ka hadlayo ciyaaraha Android, maanta waxaan rabaa inaan kugula taliyo Monster Ninja, ciyaarta madal hadda iyo tan ka duwan ee madal kugu xidhi doonta.
Barnaamijyada ugufiican ee wax looga beddelo codka ku saabsan Android
Saddexda codsi ee ugufiican ee wax looga beddelo codka ku saabsan Android. Soo ogow barnaamijyadan si aad ugu beddesho codka ku jira Android qaab fudud.
Beddelka ugu fiican ee Passbook ee loogu talagalay Android
Beddelka ugu fiican ee Passbook ee loogu talagalay Android. Kala soo bax xulashadan xulashooyinka ugu wanaagsan ee Android iyo Passbook.
Blackview P6000, oo ah terminaal awood badan oo wata batari dhan 6180mAh
Blackview P6000 ayaa imaan doonta bishaan Diseembar iyada oo wata batari aan caadi aheyn oo 6180mAh ah si ay ugu adkeysato dhamaan dalabaadkayaga si aysan ugu dhicin maalinta.
Sababaha loo rakibo xakamaynta waalidnimo mobilada carruurtaada
3 sababood oo aad ugu isticmaasho xakamaynta waalidka mobilka carruurtaada. Soo ogow sababahan sababta ay u wanaagsan tahay in la isticmaalo xakameynta waalidka.
Barnaamijyada ugu fiican ee kirismaska ​​ee loogu talagalay Android
Barnaamijyada ugu fiican ee kirismaska ​​ee loogu talagalay Android. Kala soo bax xulashadayada codsiyada ugufiican ee lagu kariyo Kirismaska.
Ciyaaraha booliska ee ugu wanaagsan Android
Ciyaaraha booliska ee ugu wanaagsan Android. Soo ogow xulashadeena ciyaaraha bilayska ugufiican ee loo heli karo Android.
Badhanka si loo hubiyo cusbooneysiinta ayaa ku jabay qaar ka mid ah Android. Raadi wax badan oo ku saabsan cayayaanka ku dhacay taleefannada Android.
Android 8.1 Oreo hadda waa la heli karaa: Pixel iyo Nexus ayaa bilaabaya inay cusbooneysiiyaan
Android 8.1. Oreo ayaa hadda loo heli karaa Pixel iyo Nexus. Soo ogow wararka sheegaya in nooca cusub ee nidaamka qalliinka uu naga tagayo.
Pokémon Go waxaa lagu cusbooneysiiyay 50 cusub Pokémon iyo xaaladaha cimilada
Pokémon Go waa la cusbooneysiiyay oo wuxuu ku darayaa 50 cusub Pokémon. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan wararka ay cusbooneysiinta Pokémon Go na keeneyso.
Nokia 8 wax taageero ah kuma lahan mashruucan “Treble Project”
Nokia 8 wax taageero ah kuma lahan mashruucan “Treble Project”. Raadi wax badan oo ku saabsan xaqiijinta shirkadda maqnaanshaha taageerada.
Kabtan Tsubasa: Kooxda Riyada, Oliver iyo Benji ciyaarta waxaa loo heli karaa Android
Kabtan Tsubasa: Kooxda Riyada: Oliver iyo Benji game ayaa maanta yimid Android. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka ciyaarta oo ku saleysan taxanaha caanka ah ee ku saabsan Android.
Xiaomi Mi A1 wuxuu ku qaataa Android Oreo qaab beta ah
Beta Oreo-ka Android wuxuu yimaadaa Xiaomi Mi A1. Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka Android Oreo qalabka Xiaomi ee horey u furaya barnaamijkiisa beta.
Sida loo abuuro GIFS-ka kirismaska ​​iyadoo wejiyadaadu gebi ahaanba bilaash yihiin!
Sida loogu abuuro gifs-ka kirismaska ​​wajiyadaada qaab gebi ahaanba bilaash ah si aad ugu hanbalyeyn karto ciidahan si ka duwan qaab asli ah.
Android Oreo Go: Nooca Android ee mobilada dhamaadka-hooseeya
Android Oreo Go: Nooca Android ee mobilada leh RAM yar. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan noockan Android ah ee gaadha taleefannada gacanta ee hooseeya,
Khariidadaha Google waxay ku darayaan qaab mootooyin
Khariidadaha Google ayaa mootooyinka ku daraya mootooyinka cusbooneysiinteeda. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan habka mootada oo goor dhow soo socota abka.
3 Goobaha wanaagsan ee sawirada daboolan ee noocyada kale ee boosteejada Android.
Xulasho 3 qolalka sawirada daboolan ka noocyada kale ee boosteejooyinka Android si aad ugu raaxaysato adiga.
Aqoonsiga Face of iPhone X ee ku saabsan Android-kaaga
Codsi layaab leh oo lagu helayo Aqoonsiga Wajiga ee iPhone X ee ku yaal terminaalkaaga Android.
Nokia 3 wuxuu toos u cusbooneysiin doonaa Android Oreo
Nokia 3 wuxuu cusbooneysiin doonaa Android Oreo kahor dhamaadka sanadka. Raadi wax badan oo ku saabsan wararka ku saabsan cusbooneysiinta taleefanka Nokia.
Google Play wuxuu horumarin doonaa asturnaanta macluumaadka isticmaalaha
Google Play ayaa kaaga digi doona ogolaanshaha arjiga aan loo baahnayn. Raadi wax badan oo ku saabsan cabbirka amniga cusub ee dukaanka.
Barnaamijyada ugu fiican ee lagu tababaro maskaxda
Codsiyada ugu fiican ee lagu tababaro maskaxda. Soo ogow xulashadayada dalabyada si aad maskaxda ugu tababarto Android.
Sababaha ay WhatsApp u xannibi karto koontadaada
5 sababood oo WhatsApp u xannibi karto koontadaada. Raadi wax badan oo ku saabsan sababaha koontadaada WhatsApp loo xiri karo.
PlayerUnknown's Battlegrounds wuxuu imanayaa Android isagoo leh laba kulan
PlayerUnknown's Battlegrounds wuxuu imanayaa Android isagoo leh laba kulan. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka ciyaarta qalabka Android.
Ciyaaraha MOBA ee bilaashka ah ee loogu talagalay Android
5-ta kulan ee ugu fiican MOBA ee loogu talagalay Android. Raadi wax badan oo ku saabsan xulashada bilaashka ah ciyaaraha MOBA ee loogu talagalay Android hadda diyaar u ah soo dejinta.
Barnaamijyada ugu fiican ee miisaanka lumiyo
Codsiyada ugu fiican ee miisaankaaga luma. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijyadan Android ee naga caawin doona inaan miisaanka u dhimo qaab fudud.
Barnaamijyada ugu fiican ee loogu talagalay Kirismaska ​​ee ku saabsan Android
Codsiyada ugu fiican ee loogu talagalay Christmas-ka ee ku saabsan Android. Kala soo bax xulashadan codsiyada Kirismaska ​​ee ugu wanaagsan Android.
Tabaha ugu fiican ee loogu talagalay Android Oreo
Tabaha ugu fiican ee loogu talagalay Android Oreo. Ku soo hel xulashadan shan khiyaamo oo loogu talagalay Android Oreo oo markaa sida ugu fiican uga faa'iideyso.
Sida loo abuuro salaantaada video-Christmas-ka 2017
Mar labaad, sida sannad kasta, waxaan ku baraynaa sida loo abuuro salaanta fiidiyowga asalka ah ee asalka ah si aad ugu hambalyeyn karto ciidahan si ka duwan.
Google Chrome wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhoofiso furaha sirta ah
Google Chrome wuxuu noo ogolaanayaa inaan dhoofno furaha sirta ah dhawaan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee ku soo socda biraawsarka goor dhaw ee Android.
[APK] Soo dejiso oo ku rakib faylka LinageOS fayl-baadhis kasta oo Android ah
Halkan waxaad ku heshay codsi caan ah oo ah LinageOS file explorer apk, oo ah miisaanka culeyska fudud iyo sahaminta faylka ee loogu talagalay Android.
Google ayaa tirtiri doonta barnaamijyada muujinaya xayeysiiska shaashadda qufulka
Google ayaa ka saari doonta barnaamijyada ku dhejinaya xayeysiiska shaashadda qufulka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan tallaabada Google ay qaadayso si ay u joojiso xayeysiisyadan.
Android Oreo hadda waa loo heli karaa HTC U11 Life
HTC U11 Life hadda way cusbooneysiin kartaa Android Oreo. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta ku soo socota taleefanka HTC.
Datally, codsiga Google si loo kaydiyo xogta ku saabsan Android
Datally: Codsiga Google si loo kaydiyo xogta moobiilka. Raadi wax badan oo ku saabsan codsigan Google si aad ugu kaydiso xogta ku jirta Android.
Nokia 5 iyo Nokia 6 waxay heli doonaan beta-ka Android 8.0 Oreo si dhakhso leh
Nokia 5 iyo Nokia 6 ayaa ku xigi doona liiska si ay u helaan beta Android Oreo aad ugu dhakhsaha badan. Sidan ayuu yidhi Yuho Sarvikas.
Xiaomi Mi 6 wuxuu ku helaa Android Oreo 8.0 qaab beta ah
Android Oreo waxay ku timaadaa qaab beta Xiaomi Mi 6. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan imaatinka cusboonaysiinta taleefanka ugu muhiimsan ee Xiaomi.
Facebook ayaa ku weydiin doonta sawir iskaa ah si loo xaqiijiyo aqoonsigaaga
Facebook ayaa ku weydiin doonta sawir iskaa ah si loo xaqiijiyo aqoonsigaaga. Waxbadan ka ogow cabirka cusub ee shabakada bulshada ay dhowaan soo bandhigeyso.
Ku soo dejiso Google Pixel 2 Widget At Jaleeca dhammaan Android
Waad ku mahadsan tahay bulshada Androidsis ee ku jirta Telegram Waan ogahay codsigan oo noo keenaya Widget At Jaleecada Google Pixel 2 ee Android kasta.
Saddex ka mid ah afar codsi oo ku saabsan Android ayaa nala socda
Seddex ka mid ah afarta barnaamij ee Android waxay la socdaan dadka isticmaala. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijyadan iyo sida ay macluumaadka ku helaan.
Google wuxuu ogaadaa basaasnimo saameysa WhatsApp
Tizi: Basaasnimo lagu helo xogta gaarka ah ee WhatsApp iyo barnaamijyada kale. Raadi wax badan oo ku saabsan spyware-ka oo saameeya barnaamijyo badan.
[APK] Soo degso noocii ugu dambeeyay ee Xperia Music No ROOT Android 4.4+
Halkan waxaad ku haysaa dekeddan si buuxda u shaqeyneysa ee ugu dambeysay ee Muusigga Muusigga ee aan xididka u ahayn ee saldhigyada Sony ee la jaan qaadaya Android 4.4 ama ka sareeya.
[APK] Soo Degso Pixel Launcher 2 Maya Xidid Google Kaaliyaha lama shaqeysiin
Halkan waxaad ku haysaa apk-ka nooca ugu dambeeya ee Gogle Pixel Launcher 2 oo leh Kaaliyaha Google oo karti u leh oo shaqeynaya adigoo riixaya
Samsung waxay ku shaqeysaa baytariyada graphene oo leh waqti dheer
Samsung waxay soo saartaa baytariyada graphene oo waqti dheer sii jira. Ka ogow wax badan oo ku saabsan horumarinta baytariyada qalabkan shirkadda.
LG V30 wuxuu ku qaataa Android Oreo qaab beta ah
Android Oreo wuxuu ku yimaadaa LG V30 qaab beta ah. Faahfaahin dheeraad ah ka ogow imaatinka Android Oreo ee heerka sare ee LG ee Kuuriyada Koonfureed.
HTC U11 ayaa cusbooneysiineysa Android Oreo laga bilaabo maanta
HTC U11 ayaa cusbooneysiineysa Android Oreo. Faahfaahin dheeraad ah ka ogow imaatinka nooca cusub ee nidaamka hawlgalka ee loo yaqaan 'HTC flagship'
Barnaamijyada ugu fiican ee cuntada lagu kariyo ee ku saabsan Android
Barnaamijyada ugu fiican ee cuntada lagu kariyo ee ku saabsan Android. Soo ogow seddexdan barnaamij ee sameeya cunno caafimaad leh neecaw.
Liiska buuxa ee dhammaan taleefannada Samsung oo cusbooneysiin doona Android Oreo. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan liistada qalabkan oo dhammaystiran.
3 ciyaaraha Android oo leh ciyaaro kayar daqiiqad
3 kulan oo loogu talagalay Android oo leh ciyaaro ka yar hal daqiiqo. Soo ogow xulitaankan cayaaraha ee u muuqda kuwa xawaaraha badan.
Android Oreo wuxuu si rasmi ah u yimid Nokia 8
Nokia 8 wuxuu cusbooneysiiyaa Android Oreo si rasmi ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan casriyeynta Nokia-dhamaadka-sare illaa nooca ugu dambeeyay ee Android.
5 kulan Android ku saleysan filimada
5 kulan Android ku saleysan filimada. Kala soo bax xulashadan cayaaraha Android ee ku saleysan filimada horeyba loogu heli jiray soo dejinta.
Barnaamijyada ganacsi ee ugufiican Android
Barnaamijyada ganacsi ee ugufiican Android. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijyadan naga caawin kara ganacsigeenna.
Jimcaha Madow wuxuu ku dhuftey Google Play Store dukaamanka 20 kulan oo iib ah waqti xaddidan
Jimcaha Madow wuxuu yimaadaa Google Play Store oo leh boqolaal dalabyo ah oo ku saabsan codsiyada iyo ciyaaraha, halkan waxaa ku yaal liiska 20 ciyaarood oo qiimo dhimis ah.
Xogta isticmaalaha OnePlus waa la xadaa lixdii saacadoodba mar
Xogta laga helo telefoonada OnePlus ayaa la xadaa lixdii saacba mar. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan amni darrada iyo qarsoodiga gaarka ah.
Facebook Messenger wuxuu nuqulan doonaa hal muuqaal oo dheeri ah oo Snapchat ah
Facebook Messenger wuxuu nuqul ka sameyn doonaa Snapchat streaks. Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee barnaamijka Facebook uu ka soo guurin doono Snapchat.
Google ayaa ku tusi doonta baytariga aad ka tagtay si hufan
Google ayaa ku tusi doonta baytariga aad ka tagtay si hufan. Ka ogow noloshan cusub ee muhiimka ah taleefannada gacanta.
Barnaamij aad u wanaagsan oo lagu xakameeyo isticmaalka xogta moobilka ee Android
Waxaan dib u eegeynaa codsi xasaasi ah oo loogu talagalay Android kaas oo kaa caawin doona inaad xakameyso isticmaalka xogta moobiilka ee aad isticmaashay terminal-kaaga Android.
Android Wear 2.6: Warka ku soo kordha cusbooneysiinta cusub. Raadi wax badan oo ku saabsan waxa ku cusub ee smartwatches.
UC Browser wuxuu ku soo laabtay Google Play
UC Browser wuxuu ku soo laabtay Google Play. Raadi wax badan oo ku saabsan dib ugu soo noqoshada biraawsarka caanka ah ee dukaanka barnaamijka.
Marvel Strike Force ayaa imanaya Android sanadka 2018
Marvel Strike Force ayaa imanaya Android sanadka 2018. Raadi wax badan oo ku saabsan RPG-ga cusub ee imanaya Android sanadka soo socda.
Google Play Store wuxuu bilaabayaa qayb cusub oo ogeysiis ah
Google Play Store wuxuu bilaabayaa qayb cusub oo ogeysiis ah. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan sheekadan cusub ee timaadda dukaanka arjiga.
BankBot: Trojan oo xada xogta bangiyada ee lagu ogaado barnaamijyada tooshka
BankBot: Trojan si loo xado xogta bangiyada ee lagu ogaado barnaamijyada tooshka. Waxbadan ka ogow arintan amniga.
Taleefankaaga Android wuu garanayaa goobtaada xitaa haddii uu naafo yahay
Taleefankaaga Android wuu garanayaa goobtaada xitaa haddii uu naafo yahay. Waxbadan ka ogow qirashada Google lagu qasbay inay sameyso.
30 maalmood oo muusiko bilaash ah oo ku saabsan Amazon Music Unlimited iyo 10 Euros si aad ugu qarash gareyso Amazon haddii aad isticmaaleysid ra'iisul wasaare
Ma rabtaa inaad haysato 30 maalmood oo muusiko bilaash ah oo ku saabsan Amazon Music Unlimited iyo sidoo kale inaad hesho 10 euro oo bilaash ah oo aad ku bixiso Amazon maalintan Jimcaha ah?
Isgoyska Xayawaanka: Taariikhda Siideynta Xerada Jeebka Waa La Xaqiijiyay
Isgoyska Xayawaanka: Taariikhda sii deynta Xerada Jeebka waa la xaqiijiyay. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka ciyaarta ee Android toddobaadkan.
OnePlus 3 iyo 3T waxay horeyba u cusbooneysiinayaan Android Oreo
OnePlus 3 iyo 3T horeyba waxay u heleen cusbooneysiinta Android Oreo. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka nooca ugu dambeeya ee nidaamka qalliinka.
Barnaamijyada safarka ee ugufiican ee laga heli karo Android
Barnaamijyada safarka ee ugufiican ee laga heli karo Android. Soo hel xulashadan xulashooyinka si aad u qorsheyso fasaxyadaada.
Android waxaa weerara malware 10-kii ilbiriqsiba
10-kii ilbidhiqsi kasta furin ayaa weerara aaladda Android. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan xogtaan oo muujinaysa dhibaatooyinka xagga amniga ee nidaamka hawlgalka.
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Android si aad ugu raaxeysato asxaabta
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Android si aad ugu raaxeysato asxaabta. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan ciyaartan ku habboon inaad kula raaxaysatid asxaabta.
Tabaha ugufiican ee lagu keydiyo batteriga Android
Tabaha ugufiican ee lagu keydiyo batteriga Android. Soo ogow xulitaankan khiyaamada ah ee aad ku badbaadin karto nolosha batteriga ee Android.
Ciyaartoyda fiidiyow ee ugu fiican Android
Ciyaartoyda fiidiyow ee ugu fiican Android. Kala soo bax xulashadan fiidiyowyada ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android horeyba loo heli jiray.
Barnaamijyada bilaashka ah ee bilaashka ah ee wicitaanada fiidiyowga loogu sameeyo Android
Codsiyada bilaashka ah ee ugu wanaagsan ee wicitaanada fiidiyowga loogu sameeyo Android. Raadi wax badan oo ku saabsan shantaan barnaamij ee bilaashka ah ee loogu talagalay Android.
Xoogagga Sonic: Xawaaraha Dagaalka ayaa hadda loo heli karaa Android
Xoogagga Sonic: Xawaaraha Dagaalka ayaa hadda loo heli karaa Android. Ka ogow wax badan oo ku saabsan ciyaarta cusub ee Sonic ee aan hadda ka soo dejisan karno Google Play.
Beta Android Oreo waxaa hadda lagu rakibi karaa Huawei P10 iyo P10 Plus
Beta Android Oreo hadda waa lagu rakibi karaa Huawei P10 iyo P10 Plus. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka Android Oreo illaa dhammaadka-dhamaadka Huawei.
Kooxaha WhatsApp waxay noqon doonaan kuwo dhameystiran mahadnaqa warkan
WhatsApp wuxuu soo bandhigi doonaa isbedello fara badan kooxaha toddobaadyada soo socda. Soo ogow wixii war ah ee kooxaha soo gaara.
Emojisyada iPhone X, «Animojis» hadda sidoo kale loogu talagalay Android
Waxaan hadda ka abuuri karnaa iPhone X emojis wax kasta oo Android ah. Waxa loogu yeero Animojis ee iPhone X hadda waa bilaash Android.
Khariidadaha Google ayaa beddelaya khariidadaha khariidaddeeda
Raadi wax badan oo ku saabsan isbeddelada ku soo socda Khariidadaha Google goor dhow. Codsiga waxaa ka go'an naqshad cusub oo khariidadeeda ah.
Nasabka 2: Kacaanku hadda waa loo heli karaa Android
Nasabka 2: Kacaanka ayaa hadda loo heli karaa Android iyo iOS. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan ciyaarta MMORPG ee hadda loo heli karo aaladaha Android.
Kaaliyaha Google wuxuu horey ugu hadlaa Isbaanishka Isbaanishka. Waxaan ku tusaynaa sida ay u shaqeyso
Kaaliyaha Google wuxuu ugu dambeyn ku hadlaa Isbaanish, tani waa waxa kaliya oo aan ku qaban karno isaga / iyada.
Telegram 4.5: Ogow waxa ku cusub cusbooneysiinta cusub
Telegram 4.5: Maxaa ku cusub cusbooneysiinta. La soco wax badan oo ku saabsan wararka ku saabsan cusbooneysiinta Telegram-ka ayaa naga tagaysa.
Faylasha Go Beta hadda waxaa heli kara qof kasta oo ku jira Google Play Store
Faylasha Go beta waxaa hadda laga heli karaa Google Play Store, Google nadiifiye for Android hadda si rasmi ah ayaa loogala soo bixi karaa gobolka beta.
Sida loo arko shaashadda taleefanka casriga ah ee kombiyuutarka
Tababarka fiidiyowga ee la taaban karo oo aan ku tusayo sida loo arko shaashadda taleefankaaga casriga ah ee kombiyuutarka. Muraayad shaashad kumbuyuutar kasta.
OnePlus wuxuu horey u sii dejiyaa barnaamij ku saabsan taleefannadaada awood u leh inuu xidid yeesho
OnePlus wuxuu horey u sii dejiyaa barnaamij ku saabsan taleefannadaada awood u leh inuu xidid yeesho. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan arjiga ay soo saartay shirkadda Qualcomm.
November warbixintii Android: Nougat iyo Oreo waxay kordhiyeen saamigooda suuqa
Warbixinta Android November: Nougat iyo Oreo waa kuwa kaliya ee koraya. Soo ogow warbixinta bisha Nofembar ee isticmaalka Android.
Telefoonada OnePlus ee cusbooneysiin doona Android Oreo
OnePlus mobiles kaas oo cusbooneysiin doona Android Oreo. Soo ogow taleefannada nooca Shiinaha ah ay awoodi doonaan inay cusboonaysiiyaan Android Oreo.
Sida looga mid noqdo shaashadda shaashadda taleefankaaga casriga ah ee 'Android' oo wat